> Resource > Ladnaansho > HFS Data Recovery - Hel Back Xogta laga File System HFS
Farqiga ugu muhiimsan ee u dhexeeya kabashada Windows iyo Mac xogta waa hababka file kala duwan ay si gooni gooni ah u taageerto. The computer Windows caadi ahaan u isticmaali NTFS nidaam faylasha, halka nidaamka Mac faylka loo yaqaan HFS (nidaamka File jaranjaro). Iyo kombuyuutarrada Mac hadda, oo ay ku jiraan iPod, isticmaali version a cusub ee lagu daray HFS si uu u bedelo nidaamka file aasaasiga ah ee HFS.
Mararka qaarkood dhibaatooyinka khasaaro xogta dhicin waayo dhismayaasha xogta ay isticmaalaan nidaamka file HFS in uu kaydiyo, maareeyaan, helitaanka iyo isku dubaridi xogta waxyeelo ama kharribeen, sababo badan oo ay ka mid yihiin weerarkii virus, khaladaad user, nidaamka xiritaanka aan habboonayn, nidaamka shil, iyo hawlgalka nidaamka cillad. Markaas waxaa laga yaabaa in habka file HFS ma shaqeeyaan si sax ah. Xaaladaha qaarkood, nidaamka file HFS mugga noqon karaan geli karin in nidaamka ka hawlgala Mac. Ama aad si qalad ah la tirtiro faylasha ama formatting. Xaaladahan oo kale, waxaad u baahan tahay in la sameeyo dib u soo kabashada xogta HFS si loo badbaadiyo faylasha aad lumiyay Mac Data Recovery software .
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada xogta HFS aad Mac?
Marka hore kala soo bixi Wondershare Mac Data Recovery software.
Waxaa jira saddex hababka aad u dooro ka mid ah "Recovery File masaxay", "ceeriin Recovery" iyo "lumay Recovery ah Barzakh,":
Halkan waxaan idinku hanuunin in ay dib ugu faylasha lumay by "Recovery File masaxay", iyo tallaabooyinka loogu soo kabsaday xogta la mid yihiin hoos Hababka kale.
Talaabada 1: Dooro habka HFS faylka
Orod aad Software Recovery Disk u Mac, iyo dooran hab hore ee "masaxay Recovery File" ee ay shaashadda ugu weyn. Dooranaysaa nidaamka file HFS meesha files lumay ahaayeen iyo riix "scan" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka. Waxaa soo kaban karto, faylasha lumay ka drives adag dibadda iyo USB flash drives nidaamyada file kala duwan iyo sidoo kale.
Talaabada 2: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan faylasha lumay nidaamka file HFS qaarkood
Marka scan ay ka badan tahay, faylasha recoverable liiska oo dhan idiin in la doorto. Waxaad awoodaa inaad ku eegaan dokumentiyada, sawirada iyo archives. Soo qaado baaritaan sanduuqa oo ka mid ah files lumay oo aad rabto inuu ka soo kabsado iyo riix batoonka "Ladnaansho".
Fiiro gaar ah: Halkan waxaad shaandhayn kartaa natiijooyinka raadinta in si hufan ay heli faylasha aad tirtiray waqti gaaban ah.
Talaabada 3: Sheeg folder soo saarka si loo badbaadiyo files dib ugu
Ku qor ama dooro meel meesha aad rabto in lagu badbaadiyo files bartilmaameedka, ka dibna riix badhanka "Save". Halkan waxaan ku heer sare waxaad ku talinaynaa in ay doortaan meelo kale oo ka asal qoruhu aad, iyo hawlaha kale sida koobiyeynta, la tirtiro ama beddelidda files ee ku burburay nidaamka file HFS taasi sidoo kale waa in laga fogaadaa waxaa laga yaabaa in mashquulin iyo overwrite degaanka ee xogta lumay.
Tilmaamo faahfaahsan oo 3 Available Recovery Hababka
Tirtiray Recovery File - Haddii aad tirto faylasha adigoo riixaya "amarka + tirtirto" ama aad u faaruqiso qashinka, tani waa sida ugu dhaqsaha badan si aad u heli xogta ku saabsan nidaamka file HFS.
Recovery ceeriin ah - Ma aad heli kartaa faylasha aad tirtiray by "Recovery File masaxay", ama khasaaraha xogta waxaa sabab u ah formatting, virus ama weerar furin ama hawlaha aan habboonayn iwm Sidaas qaadan doontaa waqti dheer inay ka soo kabsadaan xogta.
Lumay Recovery ah Barzakh, - Haddii aadan heli karin Risaalo meesha xogta aad badiyay caasimadii, waxaad isticmaali kartaa hab si aad u ogaato xijaab marka hore ka dibna soo kabsado xogta.